आउने चुनावमा प्रचण्डसँग भिड्ने नेताको नामै बाहिरियो, कसले मार्ला बाजी ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
आउने चुनावमा प्रचण्डसँग भिड्ने नेताको नामै बाहिरियो, कसले मार्ला बाजी ?
आउने चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हराउन एमालेले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छ । यसैको निरन्तरता स्वरुप राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गर्ने तयारी भएको हो ।
यसअघि चितवनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पराजित भएका पाण्डे आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरे एमाले प्रवेश गर्न लागेका हुन् ।
यद्धपी पाण्डे स्वयमले भने एमालेमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा कतै केही बोलेका छैनन् । ओलीले महत्वपूर्ण शक्ति आफूविरुद्ध लगाउने देखेर प्रचण्डले चितवनमा महाभारतको जस्तो लडाईं हुनलागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले चितवन कुरुक्षेत्रमा परिणत हुन लागेको बताएर तरंग ल्याइदिएका छन् । यसकारण पनि प्रचण्डलाई चितवनबाट चुनाव जित्न सजिलो छैन । गत निर्वाचनको मत परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा माओवादीको मात्र मतले प्रचण्ड चुनाव जित्ने सम्भावना कमजोर छ ।
उनले अर्को शक्तिशाली दलसँग कुनैपनि किसिमको गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेस या राप्रपाको साथ पाएमात्र प्रचण्डलाई सजिलो हुन्छ । तर, त्यो सम्भावना लगभग छैन । चितवन काँग्रेसको बलियो गढ हो ।